ko htike's prosaic collection: လူကို ခွေးဆွဲပြီ
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်နှင့် မမီမီးတို့ ၂ ယောက် ကို ဖမ်းမိခံလိုက်ရပြီလို့ သတင်းရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 11:18
..i urge everyont to read this !!
15 October 2007 at 01:41
Our thoughts are with brave ones.
We will not sleep well until justice is done.
17 March 2009 at 06:00